I-Redmi K20 iya kuba ne-sensor ebonakalayo yokubonisa kwiminwe | I-Androidsis
Ifowuni yeRedmi yeflegi, i K20, Uya kwenziwa ngokusemthethweni ngoMeyi 28, njengoko besesivele sazisile. Ngaphambi kokuba yenzeke loo nto, umenzi utyhile uninzi lweempawu zayo kunye nokubalulwa kwizihlandlo ezidlulileyo.
Ngoku, kweli thuba litsha, Iteyiphu entsha yesixhobo ityhile into malunga nescreen sayo, kwaye ngumfundi ofunda ngeminwe oya kuthi azithwale, eya kuba phambili ngakumbi kunangoku.
Ifowuni ephambili Xiaomi Mi 9, eyabhengezwa ngeyoMdumba, ixhotyiswe ngesikena sesihlanu somboniso wesibonisi somnwe. Iifowuni ezilandelayo I-Redmi K20 kunye ne-K20 Pro, Inguqulelo ye-vitaminized yokuqala eya kuthi ifike kwintengiso, Iya kuxhotyiswa ngo-XNUMXth uguqulelo lwesizukulwana sesibonisi somnwe weminwe.
NgokukaMphathi Jikelele weRedmi uLu Weibing, inkqubo yokuvula iminwe yeRedmi K20 inikwe Uhlobo lwe-3P yeeLens Optical Fingerprint Scanner. Kunokuthiwa ikhamera encinci ifakiwe phantsi kwescreen sefowuni.
Ukuphuculwa kwe-Hardware kuza ngohlobo lweepikseli ezinkulu ze-7.2-micron, eyi-100% ephezulu kunommandla wefotoensitive yesizukulwana esandulelayo. Indawo yokuskena iminwe nayo inyuke nge-15% kuhlobo lwesixhenxe.
Malunga nokulindelweyo, I-Redmi's K20 duo inokufika nge-6.39-intshi ye-AMOLED isikrini esiya kuthi sixhase isisombululo se-FullHD +. Zombini iifowuni kulindeleke ukuba zixhotyiswe ngezinto ezifanayo ezinjengebhetri ye-4,000mAh kunye ne-20-megapixel pop-up camera.
I-Redmi K20 inokuxhaswa yi Snapdragon 730ngexesha el Snapdragon 855 inokubakho phantsi kwehod yeRedmi K20 Pro. Kwelinye icala, inkampani sele ikuqinisekisile oko I-K20 iya kubandakanya i-586 MP ye-Sony IMX48 yecamera yesona senzwa kunye nenkxaso ye-960fps yokurekhoda kwevidiyo ehamba kancinci. Kwelinye icala, i-Redmi K20 duo iya kufika ukuya kuthi ga kwi-8 GB ye-RAM ukuya kuthi ga kwi-256 GB yogcino lwendalo. Nangona kunjalo, amaxabiso abo okwangoku asisongekile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Redmi K20 iya kufika inesizukulwane sesixhenxe esihamba phambili kwimiboniso yeminwe yokubonisa